बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपाल: Childhood Days Memories of Senior Writer Vijaya Chalise बुवाले कोठामा थुनिदिनु भयो
Childhood Days Memories of Senior Writer Vijaya Chalise बुवाले कोठामा थुनिदिनु भयो
विजय चालिसे वरिष्ठ पत्रकार-साहित्यकार हुनुहुन्छ । उहाँ विगत ३५ वर्षदेखि सहित्यिक लेखन र पत्रकारिता क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ । साहित्य बाहेक पत्रपत्रिकाहरूमा समसायिक विषय लेखन, शिक्षा, आमसञ्चार-पत्रकारिता, साहित्य आदि विविध विषयमा असङ्ख्य टिप्पणीमूलक तथा विश्लेषणात्मक लेखहरू लेखेर जनतामाझ चेतना फैलाउने काममा निरन्तर समर्पित ५७ वर्षीय साहित्यकार चालिसेसँग यस अङ्कमा हामीले उहाँको बाल्यकाल बारे कुराकानी गरेका छौं । उहाँ आफ्नो बाल्यकालको सम्झना यसरी सुनाउँनुहुन्छ:
काठमाडों जिल्ला अर्न्तर्गत जोरपाटी गाउँ विकास समितिको नौ नम्बर ओडामा एउटा रमाइलो र शान्त गाउँ छ- आरुबारी । नया सडकबाट एघार किलोमिटर जति परको यो रमाइलो गाउँ अग्लो र खुला ठाउँमा रहेको छ । पूर्व राजनीकुञ्जको जङ्गल, उत्तर सधैं सल्लेरी सुसाउने जगडोलको बन, चारैतिर हरियालीले ढाक्ने गरेको खुलाठाउँ उत्तर-पूर्वमा गोकर्र्णोश्वर र दक्षिण बौद्धनाथको बीचमा थुपुक्क बसेको यही गाउँमा म जन्मेको थिएँ । आमा सुशीला चालिसे र बाबा रमेश विकल (रामेश्वर शर्मा चालिसे ) बाट २००८ साल असार २२ गते मेरो जन्म भएको हो ।
मेरो परिवार गाउँको साधारण परिवार हो । मेरा बाजे चन्द्र शेखर ठूलै पदमा सरकारी जागिरे हुनुहुन्थ्यो । म जन्मनुभन्दा दुइ वर्षअगाडि नै उहाँ वित्नुभएकोले मैले उहाँलाई देख्न पाइन । मेरी आमाले खासै औपचारिक शिक्षा पाउनु भएको थिएन । बाबा शिक्षित र साहित्यकारसमेत हुनुभएकोले मैले भने सानैदेखि पढ्ने वातावरण पाएँ । बाबाको धेरैजसो समय घर-गाउँभन्दा बाहिरै बित्थ्यो । विहान हामी उठ्दा उहाँ हिँडिसक्ने, बेलुका हामी सुतिसकेपछि घर फर्कने हुँदा धेरै जसो हामी उहाँलाई देख्नै पाउँदैनथ्यौं । त्यसैले हाम्रो सबै लालनपालन आमाबाटै हुन्थ्यो ।
मलाई पनि सबै केटाकेटीलाई जस्तै सानोमा नयाँ कुरा र नयाँनयाँ कथाहरु सुन्न मन पथ्र्यो । म जन्मनुभन्दा अगाडि नै स्वर्गे भै सकेकोले अरूकोजस्तो मैले बाजे बज्यैको काखमा लुटपुटिएर कथाहरु सुन्ने अवसर पाइन । त्यो कमी म गाउँका साथीसङ्गाती र हाम्रै जग्गाजिमीको हेरचाह गरेर बस्ने गुल्चादाइ, मोहनलाल दाइबाट पूरा गर्थेँ । उहाँहरू हामीलाई दन्त्यकथा र गाउँखाने कथाहरू सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो ।
मेरो बाल्यकाल त्यति बेलाका मेरो उमेरका केटाकेटीको जसरी बित्छ, त्यसरी नै साधारण तरिकाले वित्यो । केटाकेटीमा अहिलेको जस्तो रेडियो, टेलिभिजन, सिनेमा केही देख्न पाइँदैनयो । म सत्र वर्षो उमेरमा पुगे पछि २०२५ सालमा मात्र रेडियो र टेप रेकर्ड देख्न पाएको थिएँ । ती कुरा बाबाले आफू अमेरिकाबाट फकँदा ल्याउनु भएको थियो । अहिलेजस्तो टोलटोलमा सिनेमाघर पनि थिएनन् । न त अहिलेकाजस्ता थरी थरीका खेलौनाहरू र अरू खेल्ने कुरा नै पाइन्थ्यो । मनोरञ्जनका साधन भन्नु नै आफ्ना उमेरका साथीसङ्गाती जम्मा भएर खेलिने लुकामारी, झुम्राका पुतलीको बिहे, गट्टा, चोर पुलिस वा डुमदाई, आसपासजस्ता खेलहरू हुनेगर्थे । कहिले काहीँ कपडाको डल्लो र भोगटेको भकुण्डो खेलिन्थ्यो ।
यसरी मेरो बालककाल गाउँकै सानो घेराभित्रै बित्यो । गाउँ र मेरो टोल पनि अहिलेकोजस्तो बाक्लो थिएन । मेरो टोलमा जम्मा छ सात घर थिए । त्यसमा पनि मेरै उमेरका केटाकेटी दुइचारजना मात्र ! मेरी दिदीको उमेरका एक छेंवल थिए । यही सानो समूह र ठाउँमा मेरो विद्यालयजानु अगाडिको समय वित्यो । सरुमा घरमैं बाह्रखरी सिकेर गाउँकै स्कुलमा चार कक्षासमम पढेपछि चावहिलको सरकारी स्कुलमा भर्ना भएँ । दश-एघार वर्षो कलिलो उमेरमा पाँच-छ किलोमिटर टाढा चावेलसम्म हिँडेरै स्कुल आउनुजानु सजिलो थिएन । त्यसैले स्कुल जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्थ्यो । बस मोटर देख्न पाउने कुरै थिएन, न बाटो नै अहिलेको जस्तो सफा र फराकिलो थियो । वषर्ामा हिलैहिलो हुन्थ्यो । अहिले सम्झँदा चाहिँ त्यतिबेला अल्छी र दुःख मानेर स्कुल नगएको भए अहिले भाइबहिनीहरूसँग यसरी कहाँ कुरा गर्न कहाँ पाउँथे र भन्ने लाग्छ ।
ठूला मानिसहरू तास आदि बाह्रमासे खेल्ने गर्थे । हामीभन्दा केही ठूला दाइहरू खोपी, पायाँ, पाङ्ग्रा, ओख्खर आदि खेल्थे । खोपी-तास-पायाँजस्ता खेल त्यतिबेला पनि राम्रो मानिँदैनथे । खराब केटाकेटीले मात्रै त्यस्तो खेल खेल्छन् भन्थ्ियो । स्कुल पढ्न थाले पछि अर्थात केही ठूलो भएपछि मेरे संगत पनि आफूसरहका र आफूभन्दा केही ठूला दाइहरूसँग हुन थाल्यो । उनीहरूकै संगतमा म पनि कहिले काहीँ खोपी तास खेल्न थालेँ, कहिलेकाहीँ ओखरमा च्याँखे राख्थेँ । । एक दिन गाउँकै सडकमा साथीहरूको करले खोपी खेल्दैं थिएँ । त्यतै आइरहनुभएको बाबाले देख्नुभएछ । मलाई घोक्य्राउँदै घर ल्याएर कोठामा थुनिदिनु भयो । त्यस पछि केही दिन त मैले ती साथीहरूकहाँ जानै छाडिदिएँ । तर केटाकेटी मन के मान्थ्यो, फेरि लुकेर साथीहरूसँग खोपी-तास खेल्ने मौका छोपिहाल्थेँ । अर्को एक दिन त्यसरी नै तास खेलिरहेको फेला परेपछि मैले त्यहीँनै नराम्ररी बाबाको हातको पिटाइ खाएँ । त्यस दिनदेखि भने मैले तास, खोपीजस्ता कुनै पनि खेलबाड गर्ने आँट गरिन । अहिले पनि यस्ता मनोरञ्जन र स्वास्थ्यलाई राम्रो नगर्ने जाड रक्सीबाट म सधैं टाढा रहन्छु । अरुले त्यतातिर विताउने समय म लेखपढ गरेर विताउन रुचाउँछु ।
अरुजस्तै कथा सुन्न सानैदेखि मन पराउँथेँ । बाबाले घरमा ल्याउनुहुुने पुस्तक-पत्रिका पल्टाउँदा पल्टाउँदै पत्तै नपाइ साहित्यतिर तानिँदै गएछु,। बाबा आफैं साहित्यकार, उहाँको नाउँ र कथा आदि पत्रपत्रिकामा छापिएको देख्दा यसरी नै आफ्नो पनि नाम छापिए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने लागिरहन्थ्यो । घरमा माधव घिमिरे, भूपि शेरचन, सिद्धिचरण, केदारमान व्यथितजस्ता ठूलाठूला साहित्यकार आउँदा उहाहरूको व्यक्तित्वले पनि नजानिँदो किसिमले तान्दै गयो । बाबा र स्वर्गीय भैरव अर्यालबाट पे्ररणा र प्रोत्साहन पनि पाउँदै गएँ । घरपरिवार, छोराछोरीको सबै जिम्मेवारी मेरी श्रीमती लक्ष्मी चालिसेले लिइदिएर सहयोग नगरेको भए पनि यो क्षेत्रमा लाग्न सकिँदैनथ्यो होला । त्यसैले उनको पनि धेरै ठूलो सहयोग छ ।
माथि नै केही सङ्केत गरेँ, मेरो अध्यनको सुरुआत पहिले घरैमा र केही पछि गाउँकै स्कुलबाट भयो । मेरो स्कुल र महाविद्यालय, विश्व विद्यालयका सबै शिक्षा साधारण स्कुल-कलेजबाट भएको हो । कक्षा चारसम्म गाउँकै अरुणोदय प्राथमिक विद्यालयमा र त्यसपछि आठ कक्षासम्म चावहिलको मित्र मण्डल हाइस्कुलमा पढेँ । कक्षा नौ र दश चाहिँ चावहिलकै मित्र सहशिक्षालय मर्निङ हाइस्कुलमा पढेर प्रवेशिका (एस. एल. सी ) उत्तीर्ण गरें । आइए त्यतिबेलाको महेन्द्ररत्न पब्लिक कलेज बसन्तपुरमाबाट पास गरेँ । आइए पढदै गर्दादेखि नै गाउँको स्कुलमा आंशिक शिक्षकका रुपमा पढाएर आफ्नो खर्च पुर्याने कोशिस गरेँ । स्कूलमा पढाएर आफू पढ्नु पर्ने हुँदा बीए राति पढाइ हुने नेशनल कलेज (अहिलेको शंकरदेव क्याम्पस ) मा पढेर पास गरेँ । बौद्धसम्म मात्रै बस चल्थ्यो, त्यो पनि साँझ पाँच-छ बजेपछि भेटिँदैनथ्यो । त्यसैले पुतली सडकदेखि दुइ घण्टा हिँडेर एक्लै आधारातमा घर आउनु पथ्र्यो । बाटो राम्रो थिएन । सुनसान हुन्थ्यो, चरोमुसो कतै नभेटिने । त्यसैले पढाइमा अब्बल हुन सकिएन, बीएसम्म सामान्य श्रेणीमा पास गरेर चित्त बुझाउनु पर्यो । बीए पास गरेर त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा अर्थशास्त्र पढ्न भनी एमएमा भर्ना भएँ । चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयमा बिहानभरि पढाएर जोरपाटीबाट एघार बजे कीर्तिपुर पुग्न सम्भव भएन । त्यसैले विश्वविद्यालयको नियमित कक्षा पनि छाड्नु पर्यो । त्यही बीचमा राति पुतली सडककै पद्मोदयमा एक वर्षो बीएडको पर्ढाई सुरु गरें । त्यो सकिएपछि बल्ल नेपाली विषयमा प्राइभेट जाँच दिएर एमए पास गरें । २०२८ सालदेखि २०३६ सालसम्म स्कुलमा पढाएपछि २०३७को सुरुदेखि गोरखापत्रमा उपसम्पादकमा भर्ना भएँ । त्यही बीच कोलम्बो प्लान अर्न्तर्गत मनोनित भइ बेलायत गएर पत्रकारिता विषयमा डिप्लोमाको उपाधि पनि लिएँ । पढ्ने र पढाउने काम त अहिले पनि छुटेको छैन । दिनको दुइ तीन घण्टा सधैँ पढ्छु । २०४२ सालदेखि नै पशुपति क्याम्पसमा पढाउँदै पनि आएको छु ।
Readers are therefore requested ...
Children's Story by Senior Writer Late Ramesh Vika...
Childhood Days Memories of Senior Writer Vijaya Ch...